Blogger of this week: Asmita Paudel - MeroReport
Blogger of this week: Asmita Paudel
हरिसिद्धी ललितपुर निवासी अस्मिता पौडेल हाल वातावरण बिज्ञानमा स्नातक अध्ययनरत छिन् । ब्लगिङ क्षेत्रमा भर्खरै प्रवेश गरेकी अस्मितालाई संगीतमा रुची छ । यस पटक मेरोरिपोर्ट साताको ब्लगर बन्न सफल अस्मिता पौडेलको अनुभव बाँड्ने प्रयास हामीले गरेका छौँ । प्रस्तुत छ उनीसितको छोटो कुराकानीः
ब्लगिङमा कसरी आकर्षित हुनु भयो ? कहिलेदेखि ब्लगिङ सुरु गर्नु भयो ?
मैले ब्लगिङ गर्न थालेको धेरै भएको छैन । मैले धेरै अघि देखी लेख्न थालेको हुँ तर मेरो लेख डायरी र नोटबुकमा मात्रै सिमित हुन्थ्यो । मलाई मसँग बिचार मिल्ने अरु पनि छन् जस्तो लाग्यो । र आफ्नो बिचार साटासाट गर्नको लागि ब्लगिङ गर्ने बिचार गरेँ ।
मैले अघि नै भने म ब्लगिङमा नयाँ नै छु र भर्खर सिक्दै छु । मैले यसलाई अन्लाईन डायरीको रुपमा सुरु गरेकी हुँ । मेरो ब्लगमा सकरात्मक रेस्पोन्स पाएर एकदमै खुशी छु । बिशेष गरी प्रोत्साहनको लागि मेरोरिपोर्टलाई धन्यबाद दिन चाहन्छु ।
म त्यस्तो कुनै बिशेष बिधामा लेख्दिन । मेरो मनमा जे आउँछ त्यही लेख्छु । म यसलाई अझ निरन्तर बनाउने प्रयास गर्दैछु ।
एकैछिन तपाईंको ब्लगको कुरा गरौँ । आफ्नो ब्लगको नाम comfortably numb राख्नु भएको छ ? यस्तो नाम राख्नुको पछाडी के कारण छ ?
जब कहिलेकाहीँ दिमागले सोच्न छोड्छ, हामी त्यतिबेला केहि महसुस पनि गर्दैनौँ । त्यो बेलामा के सही वा गलत हो भन्ने छुट्टाउन सकिदैन । तैपनी हामी भित्र एक प्रकारको शान्ति महसुस गरी रहेका हुन्छौँ । कहिलेकाही मैले त्यस्तै महसुस गरेकी छु ।
अहिलेसम्म मैले जुनसुकै बिषयबस्तुमा पनि ब्लगिङ गर्ने गरेको छु । अब केहि बिशेष बिधामा ब्लगिङ गर्ने बिचार गरेकी छु । सोच्दै छु केमा राम्ररी प्रस्तुत् गर्न सक्छु भनेर ।
मैले ब्लगिङ सुरु गर्नु अघि यसको बारेमा केही थाहा थिएन । तर अहिले आएर मलाई ब्लगिङको कन्सेप्ट एकदमै राम्रो लागेको छ । हामी हाम्रो देश नेपाललाई तेस्रो मुलुक भन्दछौ तर हामी कहाँ प्रविधीको यती विकास भइसकेको छ कि हामीले आफुलाई पिछडिएका भनेर सोच्नु पर्दैन जस्तो लाग्छ । नेपालको ब्लगरहरुले यो कुरा साबित गरिदिएका छन । ब्लगिङको भविष्य राम्रो छ ।
ब्लग भनेको आफ्नो धारणा र अभिव्यक्ती स्वतन्त्र व्यक्त गर्न ठाउँ हो । हामीकहाँ केही युवा ब्लगरहरूले ब्लगिङ्लाइ ब्यवस्थित र मर्यादित बनाउन आचारसंहिता पनि बनाएका छन, तपाइलाइ के लाग्छ, ब्लगिङमा आचारसंहिताको जरुरी छ र किन?
हामीले गर्ने हरेक कुरामा निश्चित प्रकारका आचारसंहिताको पालना गर्नु पर्छ । नेपाली ब्लगिङ क्षेत्रमा पनि बौद्धिक चोरी र अरु थुप्रै नराम्रो प्रवृत्ति देखिएको छ । यस्तो प्रवृत्ति रोक्न आचारसंहिताको जरुरी छ ।
अब एकै छिन मेरोरिपोर्टको बारेमा कुरा गरौँ । मेरो रिपोर्टको बारेमा तपाईंको के धारणा छ ?
नागरिकले ज्ञान आदानप्रदान गर्ने र छलफल गर्ने थलोको रुपमा मेरोरिपोर्ट प्रस्तुत भएको छ र यो निकै राम्रो प्रयास हो । मेरोरिपोर्टले ब्लगरहरुलाई गरेको प्रोत्साहन पनि प्रसंशायोग्य छ ।
मेरोरिपोर्टले राम्रो कामको सुरुवात गरिरहेको छ । निरन्तरताको लागि शुभकामना ।
अस्मिताको ब्लगः http://azmeep.blogspot.com/
Comment by Asmita Paudel on February 17, 2012 at 12:17pm
thank you.. :) yeah, u do deserve one hai.... sure....
Comment by JawKnockRaazaa on February 17, 2012 at 11:57am
oe congrats! I deserveaparty hai! nothing less! :))
Comment by Devi sapkota on February 16, 2012 at 11:25am
Comment by Binaya Shekhar on February 16, 2012 at 10:43am
Comment by Asmita Paudel on February 15, 2012 at 5:30pm
thank you!! I am humbled.
Comment by Amuna Chapagain on February 15, 2012 at 5:03pm
congratulation Asmita ji
Comment by Ajeeta Sigdel on February 15, 2012 at 4:55pm
Comment by Indra Dhoj Kshetri on February 15, 2012 at 4:43pm
Congratulations Asmitaji. Keep writing. We'll be happy to see you in MeroReport too.
Comment by Rupen on February 15, 2012 at 4:33pm
Congratulation Asmita ji.